Yehowa akoa amanehunu, ne wu, ne ne sie (1-12)
Wobuu no animtiaa, na wɔpoo no (3)
Ɔsoaa nyarewa ne ɛyaw (4)
‘Ɔte sɛ oguan a wɔrekokum no’ (7)
Ɔsoaa nnipa pii bɔne (12)
53 Hena na wagye nea wate afi yɛn nkyɛn no adi?+ Na hena na wɔayi Yehowa basa akyerɛ no?+ 2 Ɔbɛyɛ sɛ dua a afifi+ wɔ n’anim,* te sɛ ntini wɔ asaase a ɛso awo so. Ɔnyɛ onipa a odi mu, na onni anuonyam biara,+Na yehu no a, biribiara nni ne ho a ɛbɛma yɛaka akɔ ne ho.* 3 Nnipa buu no animtiaa, na wɔpoo no;+Ɔyɛ onipa a ohuu yaw na ohuu sɛnea yare te. Ná ɛte sɛ nea wɔde n’anim ahintaw yɛn.* Nnipa buu no animtiaa, na yɛamfa no anyɛ hwee.+ 4 Nokwarem no, ɔno na ɔsoaa yɛn nyarewa,+Na ogyee yɛn yaw hyɛɛ ne ho.+ Nso yebuu no sɛ obi a Onyankopɔn atwe n’aso, wahwe no, na wama ne ho ayeraw no. 5 Nanso yɛn mmarato nti+ na wɔde ade wɔɔ no;+Yɛn mfomso nti na wobubuu no.+ Ogyee asotwe a ɛbɛma yɛanya asomdwoe,+N’akuru nti, wɔsaa yɛn yare.+ 6 Yɛn nyinaa afom kwan te sɛ nguan;+Obiara afa ne kwan.Na Yehowa ama yɛn nyinaa bɔne abegu no so.+ 7 Wɔhyɛɛ no ahometew,+ na ɔmaa kwan ma wɔtan n’ani,+Nanso wammue n’ano. Wɔde no kɔe te sɛ oguan a wɔrekokum no,+Te sɛ oguan a wɔretwitwa ne nwi a wayɛ komm, Na wammue n’ano.+ 8 Wɔhyɛɛ no so, na wɔde no kɔe a wɔammu atɛntrenee amma no;Na hena na ɔbɛhaw ne ho sɛ obehu n’awo ntoatoaso?* Wotwaa no fii ateasefo asaase so;+Me man mmarato nti na wɔboroo no.*+ 9 Na owui no, wosiee no wɔ abɔnefo+Ne asikafo* asiei,+Ɛwom sɛ wanyɛ bɔne* biara,Na na nnaadaa biara nni n’anom.+ 10 Nanso, na ɛsɔ Yehowa ani* sɛ obebubu no, enti ɔma ɔyaree. Sɛ wode ne nkwa* bɛma sɛ afodi afɔre+ a,Obehu n’asefo,* ɔbɛma ne nna akyɛ,+Na ɛnam no so na nea ɛsɔ Yehowa ani* begyina.+ 11 Obehu n’amanehunu,* na ne koma atɔ ne yam. M’akoa+ a ɔyɛ treneeni no nam ne nimdeɛ soBɛma nnipa pii anya trenee gyinabea,+Na wasoa wɔn bɔne.+ 12 Ɛno nti, mɛma wanya kyɛfa wɔ nnipa pii mu,Na ɔne mmarima a wonim ko akyɛ nneɛma a wɔanya wɔ ɔko mu,Efisɛ ɔde ne nkwa* too hɔ maa owu,+Na wɔkan no fraa mmaratofo;+Ɔsoaa nnipa pii bɔne,+Na ogyinaa mu maa mmaratofo.+
^ “N’anim” betumi akyerɛ onipa bi anim anaa Onyankopɔn anim.
^ Anaa “biribiara nni ne ho a ɛbɛma ne ho ayɛ yɛn akɔnnɔ.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Ná ɔte sɛ obi a nnipa ayi wɔn ani afi n’anim.”
^ Anaa “n’abrabɔ?”
^ Anaa “wɔbɔɔ no kum no.”
^ Nt., “osikani bi.”
^ Anaa “wanni nsɛmmɔne.”
^ Anaa “Nanso Yehowa ani gyee ho.”
^ Anaa “nea Yehowa pɛ; nea Yehowa ani gye ho.”
^ Anaa “ne kra ahoyeraw.”